DHEGEYSO-Barnaamijkii Xulashada Daljir iyo Faadumo Ladan. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Barnaamijkii Xulashada Daljir iyo Faadumo Ladan.
Agoosto 14, 2016 4:22 b 0
Garoowe, Aug 14 2016-Kulana wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii duhurnimo ee Xulashada Daljir oo aad maalin walba marka Jimcaha laga reebo kadhegeysataan xarumaah kaal duwan ee Daljir.
Barnaamijka waxaa maanta Xarunta Daljir ee magaalada Garoowe kasoo jeedinaysa Weriye Faadumo Cabdullaahi Suleymaan (Faadumo Ladan).
DHEGEYSO-Maxaa kajira in Ciidamada DFS Dhackageysteen Shalanbood.
DHEGEYSO-Odayaasha Buuhoodle oo qaadacay wadahadalka Soomaaliland.